Akụkọ - Otu esi ahọpụta ezigbo ntọala mmiri?
Ntọala mmiri mmiri anyị kacha ere ugbu a na 40 shades! Mpempe akwụkwọ dị fechaa, nke enweghị mmanụ na-agwakọta nke ọma na anụ maka ọmarịcha ọkara matte mara mma nke na-adị ogologo ụbọchị niile. Usoro mmiri mmiri na-enyere aka weghachi ihe na - adịghị mma maka anụ ahụ. Zuru oke maka ụdị anụ ahụ niile na usoro a dị fechaa na-enye mkpuchi iji nyere aka ọbụlagodi akpụkpọ anụ ma belata ihe na-acha uhie uhie mgbe ị na-arụ ọrụ iji nyere aka kpochapụ akpụkpọ gị.
Chei, mma mmanu mmanu! Ka anyị bido n’ozi ọma ahụ: Ndị nwere etinyere n’ime etinyere n’ụba ji akpụkpọ ahụ dị mụrụmụrụ mee ka ọ ghara ịda mbà ma na-enwekarị nchedo anwụ. Ọzọ - igirigi dị nso! Ya mere, yay! Enwere nke ahụ.
Ma, na ntụgharị ihu, ndị nwere mmanu mmanu mara na, belụsọ na ị jiri amamihe họrọ ngwaahịa gị, Ihe ngosi ahụ dị adị, na idobe etemeete ọhụụ ma gbazee bụ mgba. Ntọala na-adịkarị mfe ịnweta patch na sliding-na na isi oyi akwa na-aga gị nke ọma-etinyere ihe ọ bụla ọzọ. Na-akụda mmụọ!
Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị nwere mmanu mmanu iji họrọ ngwaahịa emepụtara maka ụdị akpụkpọ gị. Ọ bụrụ na ị gbalịsiri ike na The Shine mana ọ gbalịghị ngwaahịa ndị enyere ya aka, tụkwasị anyị obi. Ọ bụ ngụkọta onye na-agbanwe egwuregwu.
Nke a bụ usoro usoro nke atọ anyị maka itinye etemeete na akpụkpọ mmanu mmanu:
Nzọụkwụ # 1: Tinye onye isi maka akpụkpọ mmanụ
N'ụzọ dị ịtụnanya, a na-echebara ntọala ntọala bụ ezigbo ngwaahịa maka akpụkpọ anụ! Ọ bụ naanị ike nke ike maka ihu gị! Ejiri n'okpuru ntọala, ihe na-abụghị comedogenic Baby Skin Instant Pore Eraser na Face Studio Master Prime Primer Makeup na blur + Pore Minimize na-eme ka pores ghara ịhụ anya, ọnya na-enwu ma na-enyere etemeete aka ogologo oge.
Ntụpụ ụkwụ # 2: Tọọ ntọala maka mmanu akpụkpọ
Anyị na-akwado ntọala anyị kachasị mma maka akpụkpọ anụ mmanu, Jinfuya Matte + Pore-less Foundation. Ntọala a nke na-emeri, nke na-agbachitere ihe ọmụma, nwere ihe nzuzo nzuzo na-etinye n’ime ya — nke ụrọ na-amị mmanụ, nke na-eme ka ọ dị nkọ! O juputara na micro-powders di ike nke na-acho ma na-eme ka anya pores di n'enweghi nzuzu. O yikwara nnọọ dị ka akpụkpọ — e kere eke ma maa mma.
I nwekwara ike nwalee Jinfuya Shine-Free + Balance Stick Foundation. Stick siri ike ighota ma oburu n’inwe mmanu mmanu-usoro a bu ezigbo mmanu. Ma nke a fechaa osisi ntọala nwere pụrụ iche mgbochi enwu ntụ ntụ isi n'ime ya na-ozugbo dissolves ngafe mmanụ na bụla swipe!
Chọta ndo nke Jinfuya Foundation na ngwa ọrụ Jinfuya Regimen Finder.
Ntụpụ ụkwụ # 3: Itinye SITE ntụ ntụ maka mmanu akpụkpọ
Ọ bụrụ na ị nwetara mmanu mmanu akpụkpọ mgbe ahụ ka ị yikarịrị nwere ntụ ntụ na mma gị ulo mgwo agha-ọ bụ ihe kacha ntabi-enwu fix. Ma! Ọ bụghị mmadụ niile ka ha hà nhata.
A na-ejikarị mmanụ nwere mmanụ ntụ. Ọ bụ ezie na ha nwere ike ịhazi ngwangwa maka mmanu mmanu, ha nwere ike inye aka na nsị gị. Nhọrọ anyị? Mmiri na-acha ọcha na etemeete na ụbọchị niile, Nchịkwa Mmanụ Ala Na-enweghị Nchọgharị Na-eme ka akpụkpọ ahụ dị ọhụrụ, dị ọcha, na-enwu gbaa ruo ọtụtụ awa ma dị ka aha ahụ na-egosi, 100% enweghị mmanụ.